Induction Susceptor Ukufudumeza kwiimveliso zorhwebo
Induction Susceptor Ubushushu
Umsebenzi we-Induction Susceptor Heating Works?
I-susceptor isetyenziselwa i lokutshisa Izinto ezingezo-conductive ezinje ngeeseramiki kunye neepolima I-susceptor ishushu ngenkqubo yokufudumeza ngaphakathi, apho ukuhambisa kugqitha ubushushu kwizinto zomsebenzi. I-Susceptors zihlala zenziwe nge-silicon carbide, i-molybdenum, i-graphite, i-steels ezingenasici kunye nenani lezinye izinto eziqhubayo.
Ngokufudumeza i-susceptor, sisebenzisa i-induction ukufudumeza i-susceptor yesinyithi, ethi emva koko itshise izinto eziziisekondari ngokunxibelelana ngokuthe ngqo okanye ngemitha.
Yintoni i-Induction Susceptor Heating?
Ukufudumeza i-Susceptor ngo-Induction kusetyenziswe ngokubanzi kwiinkqubo apho izinto eziza kufudunyezwa zingaqhubi ngombane okanye zingafudunyeki ngokulula ngokufudumeza ngokungenisa. Zombini iinxalenye zesinyithi kunye nezingezizo zesinyithi zinokufudunyezwa ngokungangqalanga ngokusetyenziswa kwesususa, shushu ngokufakwa. Abaxhasi banokuqhagamshelana nabo okanye bahlukane nenxalenye okanye izinto eziza kufudumala. Xa kunxibelelana nokufudumeza kudlula ngokuqhutywa, xa ukwahlula ukufudumeza ngemitha.
Igama elithi 'susceptor' njengoko lisetyenziselwa ukufudumeza induction lithetha izinto ezihamba ngombane ezibekwe phakathi kwe-coil yokufudumeza induction kunye nezinto ezinokufudunyezwa njengendawo yokusebenza, eyomeleleyo, eyoludaka, engamanzi, yegesi, okanye indibaniselwano ngentla. Ngendlela yayo elula, i-Induction Susceptor Heater inokuba sishubhu sesinyithi esidityaniswe phakathi kwekhoyili kunye nezinto ezinokufudunyezwa. I-susceptor enjalo ishushu ngokufudumeleyo yintsimi ye-electromagnetic esekwe yi-coil ye-induction ukuze icandelo lifudunyezwe ikakhulu yimitha okanye ngokuqhutywa sisususor eshushu. Ukusetyenziswa kwe-susceptor kubonelela ngeendlela ezifanelekileyo zokufudumeza izinto ezingahambisiyo ezinje ngeekeramiki, iglasi, iiplastikhi, iisemiconductors, iikhemikhali eziphilayo nezingezizo ezomdiliya, ukutya, iziselo ngokusebenzisa ithuba lolawulo oluchanekileyo, ukusebenza ngokukuko, ukukhawulezisa ukukhawuleza, kunye nokuthembeka Izibonelelo zokusebenzisa umbane oshushu / umbane. Uyilo lwe-HLQ kunye nonikezelo isixhobo sokufudumeza Ukusuka kwiityhubhu ezilula ukuya kwizithuthi ezifudumeleyo, iigerger, kunye nolunye ulwakhiwo olunzima.
Abaxhasi banokuyilwa kwaye baqeshwe ukukhusela / ukukhusela imimandla yenxalenye engazukubekwa kumhlaba wokungeniswa ngaloo ndlela kulawulwa ubushushu obufunyenweyo. Ngamanye amaxesha, ezi kubhekiswa kuzo njengeziphambukisi okanye amakhaka. Kwiimeko ezinjalo, i-susceptor igubungela isahlulo senxalenye yokukhusela ngombane. Ukuba i-susceptor ayiyirhangqi ngokupheleleyo le ndawo, ukufudumeza kuya kwenzeka ngaxeshanye ngokufudumeza ngokuthe ngqo kwiindawo ezingakhuselwanga kunye nemitha kunye nokuqhutywa kwesususor. Kwiimeko ezininzi ii-susceptors ezikhuselayo zenziwe ngobhedu olupholiswe ngamanzi apho imimandla ekhuselweyo yenxalenye yayo ingafudunyezwa kwaphela.
Ngokusisiseko, ukufudumeza i-susceptor usebenzisa i ukufakelwa komthombo kukusasazeka kwemitha kunye / okanye nokufudumeza. Nangona kunjalo, amanqaku amaninzi enza ukuba kube lula kakhulu. Okokuqala, i-susceptor ifudunyezwa ngombane, ivumela ukufudumeza nge-quartz, iglasi, okanye amanye amagumbi asebenza ngombane ngombane wokugcina kunye nolawulo. Okwesibini, i-susceptor ecekeceke isebenza njengomthombo we-radiation onokufudumeza ngokukhawuleza kwaye upholise ukuba uyafuna, ukudala umthombo wobushushu onokutshintsha ubushushu ngokukhawuleza. Ukufudumeza i-induction ukuba i-susceptor ivumela ukuthembeka okuphezulu ngenxa yokuba i-susceptor enobushushu obuphezulu akufuneki ukuba idityaniswe nomqhubi ophakamileyo wangoku ukunika amandla afunekayo ekufudumaleni. I-susceptor inokuba nabuphi na ubungakanani. Kwiindawo ezinejometri entsonkothileyo, i-susceptor iphucula ukufana kobushushu, xa kuthelekiswa nokufudumeza ngokuthe ngqo. I-Susceptors ivumela izinto ezincinci kakhulu ezinje ngemicu yentsimbi okanye iingcingo ukuba zifudunyezwe kumaqondo obushushu aphakamileyo zisebenzisa amaza ombane aphantsi kunye noqoqosho aphakathi. Xa ujonga uyilo lokufudumeza isusoror kukho inani lezinto ezingena ekukhetheni izixhobo ezifanelekileyo ze-susceptor, ezi ke zibandakanya ukwenziwa kwakhona kwendalo apho umntu onxibelelana naye achukumise. Ukukhetha izinto ezifanelekileyo kukhokelela kwinkqubo ethembekileyo, ukukhetha izinto ezingalunganga kunokukhokelela kungcoliseko kunye nokusebenza okuthembekileyo.
Induction Susceptor Ubushushu Izicelo
Abarhaneli benza Ukufudumeza ubushushu kuyasebenza ukufudumeza zonke izinto ezingezizo ezesinyithi kunye nezinto ezenziwe ngetsimbi, ukuvumela ukufudumeza ubushushu ukuba bube sisixhobo esibalulekileyo kwimveliso yokutya kunye neziselo, iiKhemikhali, ii-elektroniki, iglasi, iiplastikhi, irabha, ulwakhiwo, ezonyango zabathengi kunye neemveliso zeshishini.
iindidi Teknoloji tags Thenga iSusteror Heater, HF Susceptor Ubushushu, Isebenza njani i-Induction Susceptor Heating Works, Induction Susceptor Heater, Induction Susceptor Ubushushu, susceptor, Isixhobo sokufudumeza, Ixabiso leSusteror Heater, Susceptor Ubushushu, Umgaqo oshushu wokufudumeza, Isimanga sokufudumeza ithiyori, Yintoni i-Induction Susceptor Heating Post yokukhangela
induction Ukufudumeza uxinzelelo kuxinzelelo